China 3M Deluxe Pro Angler Kayak ifektri abakhiqizi | Oceanus
HLALA IN KAYAK
Electric bengena ezingosini zayo Motor
10ft olulodwa isinyathelo kayak
13ft Ukudoba Kayak
2.8M kayak olulodwa
2.4M Nengane Kayak
Umkhiqizo Incazelo: 3M Deluxe Pro Angler Kayak ulula isisindo okulula ukuyiphatha. Lokhu kayak igodla isikhundla ukuthi ukufakwa motor kagesi .Seat indawo Ungabeka ibhethri ukulondoloza eziningi isikhala travel. Izingxenye Standard: 1 * Deluxe Aluminium ...
Material: LLDPE / UV sokuvikela
Isisindo Net: 23kgs
Khulisa Isisindo: 25kgs
20'ft Isitsha Umthamo: 40pcs lokhu kayak
40'HQ Isitsha Umthamo: 100pcs lokhu kayak
3M Deluxe Pro Angler Kayak ulula isisindo okulula ukuyiphatha. Lokhu kayak igodla isikhundla ukuthi ukufakwa motor kagesi .Seat indawo Ungabeka ibhethri ukulondoloza eziningi isikhala travel.
1 * Deluxe Aluminium Isihlalo
3 * Multi induku umnikazi
5 * Big phambi dweba
1 * Drain ipulaki
1 * inkomishi umnikazi
8 * inkinobho D-indandatho
1 * black Bungee
2 * ethwele izibambo
1 * Electric motor umnikazi indawo
Ukukhokha & Delivery:
Ukukhokha Imigomo: A): 30% idiphozi T / T kusengaphambili, 70% esele ngokumelene ikhophi BL;
B): 100% T / T kusengaphambili, oda isampula.
Delivery: ngemikhumbi port wekhasimende eliseduze, isikhathi esiqondile kungaphansi langempela.
Q: amanani wethu ingase ishintshe kuye imodi langempela kayaks kanye nobungako. Sizokuthumelela i Uhla lwamanani olusha ngemuva oxhumana inkampani yakho nathi ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa.
Q: Yebo, ngokuvamile, MOQ yethu 20'ft eyodwa ephelele noma 40'HQ esitsheni. Yiqiniso, uma udinga into eyodwa noma ngaphezulu, kwamukeleka kithi. Ukuze ukwazi eminye imininingwane, sicela uxhumane nathi.
Singakwazi yini ukuthenga izinhlobo ezahlukene kayaks kwelinye isitsha?
Yiqiniso, nje angitshele izinhlobo kayak kanye nobungako oludingayo, futhi thina kuzokusiza ukucacisa ubukhulu yokugcina ngokusebenzisa ukucabanga.
Kungakhathaliseki ukwamukela Logo wekhasimende?
Yebo, singaya noma uzitholele Logo yakho ku sikebhe we kayaks.
Yini umbala kungaba etholakalayo?
Q: imibala Single futhi mix imibala babekwazi kwenziwe.
Is umkhiqizo igcwele kanjani?
Iphakheji Yekuchumana: Olunye ungqimba bubble isikhwama, imitha elilodwa amakhadibhodi eside ezansi, futhi nesikhwama esisodwa ungqimba plastic. Yiqiniso, singakwazi futhi ukupakisha kayaks ngokuvumelana nemfuneko yakho.
Uyini isikhathi ukulethwa?
Q: isikhathi Ukuhola: 1-2 izinsuku isampula ukuze, 7-10days ngayinye 20'ft esitsheni, futhi 10-15days ngalinye 40 'HQ esitsheni seziphumele idiphozi.
Kungani kufanele ukhethe Blue Ocean Kayak Factory njengoba umphakeli wakho?
OEM sevisi itholakala, eminyakeni engaphezu kwengu-10 nakho, Kuhle sokuma amasevisi nokuhlonza, kwaphela iminyaka emithathu singayitholi iwaranti kayak sikebhe, Professional zokusebenza ithimba ukukukhonza, izisekelo Technical nangemva yokuthengisa amasevisi.
Kanjani ngani izinga yomkhiqizo?
Inqubo yethu yokukhiqiza has uchungechunge uhlu isheke ukuqinisekisa ukuthi kayaks zethu ukuhlangabezana namazinga ethu izinga. Ukuhlolwa Amanzi kumele kwenziwe ngaphambi kokuthi isongwe.
Faka nokufakwa hlola, izesekeli hlola iwukuba ukwenze ngaphambi nokupakisha. Inqubo yethu ikhiqiza wasenza kathathu hlola kayak nganoma yisiphi nokushintshashintsha yokukhiqiza.
Isiqinisekiso uneminyaka engu-3 Hull, izinyanga ezingu-6 ezifakwe, futhi ngaphakathi 24 amahora uphendule ukuxazulula izinkinga.
Okulandelayo: 4M Deluxe Pro Angler Kayak
2 Umuntu Ukudoba Kayak
Double Ukudoba Kayak
Ukudoba Kayak Nge Aluminium Izihlalo
Ukudoba Pedal Single Kayak
Single Ayihlale eziphezulu Kayak Ukudoba Kayak
3.6M Ukudoba Kayak nge Aluminium Isihlalo
Bhalisa ukuze newsletter Blue Ocean Kayak futhi abe ngowokuqala ukwazi ngezindaba zamuva, izipesheli, kanye nemicimbi.